नेपाल आज | अक्षर लेखाइमा झल्कन्छ मानिसको व्यक्तित्व
अक्षर लेखाइमा झल्कन्छ मानिसको व्यक्तित्व
आइतबार, ०५ साउन २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज (ADM)
कुनै अपरिचित व्यक्तिको व्यक्तित्वबारे उसलाई नदेखेको अवस्थामा अडकल गर्न सम्भव छ ? हो सम्भव छ । ग्राफोलोजी अर्थात हस्तलेखन विज्ञान भन्दछ– ‘तपाईंको लेखाइबाट तपाईंको व्यक्तित्व मात्र होइन, तपाईंको बानी, इमान्दारी, स्वभाव अर्थात तपाईं के हुनुहुन्छ आदि बुझ्न सकिन्छ ।’ सुप्रसिद्ध हस्तलेखन विशेषज्ञ रोबर्ट शार्कको भनाइअनुसार लेखाइ हातको मात्र नभएर मस्तिष्ककै प्रतिबिम्ब हो ।
धेरै समयअघि अरस्तुले भनेका थिए– ‘बोलिएका शब्दहरु मानसिक अनुभूतिका अभिव्यक्ति अनि लेखिएका शब्द बोलिएका शब्दका प्रतिक हुन ।’ तर लेखाइको वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धान धेरैपछि शुरु भयो । सत्रौं शताब्दीको उत्तराद्र्धमा सर्वप्रथम एल्डेरिसियस प्रस्पर (इटली) द्वारा ‘आइडियोग्राफिया’ बारे अध्ययन गरिएको थियो । त्यसपछि फ्रान्सको एक चर्चसंग सम्बन्धित समूहले हजारौं लेखाई संकलन गरेर अध्ययन गर्यो र प्रयोगमा आधारित व्यावहारिक तथ्यांक र विभिन्न संकेत प्रणालीको निर्माण गर्यो ।
यूरोपभरि तहल्का मच्चाउने गरी जर्मनहरुले हस्तलेखनलाई एक गतिशील विधाको रुपमा विकसित गरे । त्यसपछि यो अवधारणा १९२० को दशकमा अमेरिका पुग्यो । त्यहाँ मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक तथा न्यूरोलोजिस्टहरुले हस्तलेखनबारे विस्तृत अध्ययन गरे । अमेरिकामा हाल ठूला कम्पनीमा हस्तलेखन विशेषज्ञको राय विना कुनै व्यक्ति नियुक्ति गरिदैन् । तपाईंको लेखाइशैली शुरु गर्दा कस्तो थियो, हाल कस्तो छ ? के तपाईंको लेखाइ तनावग्रस्त, उदासीन वा खुशीको क्षणमा बद्लिरहन्छ ? यी सबै प्रश्नको उत्तर हस्तलेखन विज्ञानले दिन्छ । लेखाइबाट चरित्र चिनिने केही उदाहरणहरु तल प्रस्तुत गरिएका छन् । तपाईंहरु पनि यसलाई मनन् गरी लेखाइबाट व्यक्तिको व्यक्तित्व बुझ्ने प्रयास गर्नुस् ।
- जुन व्यक्ति बारम्बार एउटै कुरा घुमाई फिराई लेख्दछ, त्यस्तो व्यक्ति प्रायः हिनभावले ग्रस्त हुन्छ । उसमा आत्मविश्वासको कमी र अचेतन मनमा आशंका रहिरहन्छ । यस्ता मानिस शंकालु र अज्ञात आशंकाबाट त्रसित रहन्छन् ।
यसको विपरीत संक्षिप्त, सटीक तथा मुख्य कुराहरु मात्र लेख्ने व्यक्ति आत्मविश्वासी तथा दृढ संकल्पका धनी हुन्छन् । तर आवश्यकताभन्दा पनि अति संक्षिप्त पत्र लेख्ने अहंकारले ग्रसित हुन्छ ।
- जो लेखेको मेट्न चाहँदैनन् यस्ता मानिस ढिपीवाल हुन्छन् । यिनीहरु सजिलैसंग आफ्नो भूल स्वीकार गर्दैनन् ।
कागजमाथि धेरै जोड दिएर लेख्ने व्यक्ति प्राय आत्मकेन्द्रित तथा स्वार्थी मनोवृत्तिका हुन्छन् । यस्ता मानिस रक्तचाप तथा मानसिक तनावबाट ग्रसित हुन्छन् । दबाबका साथै लेखाइ मोटो र अक्षरको आकार ठूलो भएमा यसले लेखक धूर्त तथा प्रतिशोधी प्रवृत्ति भएको जनाउँछ ।
- एकदमै हलुका हातले कागजमा दबाब नदिई लेख्ने व्यक्ति प्राय संवेदनशील, भावुक तथा कलात्मक अभिरुचिका हुन्छन् । मध्यम दबाबसाथ लेख्नेहरु व्यावहारिक तथा यथार्थवादी हुन्छन् । लेखिएका अक्षरको देबे्रतर्फको झुकाउ आत्मकेन्द्रित उदार तथा दूरदर्शी व्यक्तित्वको सूचक हुन्छन् । दाहिनेतर्फ झुकाउ भएको लेखाईले भावुक तथा आशावादी र मिलनसार स्वभावको संकेत गर्दछ । यसैगरी सोझो अक्षर लेख्ने स्पष्टवादी, धैर्यवान तथा मृदुभाषी हुन्छन् । यिनीहरु जीवनमा सम्झौतालाई पर्याप्त स्थान दिने खालका हुन्छन् तर पनि भावुक हुँदैनन् ।
- शब्दहरुबीच नियमित ठाउँ छोड्ने व्यक्ति तार्किक, विवेकशील तथा न्यायप्रिय हुन्छन् । यिनीहर तथ्यको सही मूल्यांकन गरी आफ्नो धारणा निर्धारण गर्दछन् ।
- लेखाइमा घुमाउरो अक्षर हुनुले सहानुभूतिपूर्ण स्नेहयुक्त स्वभावलाई जनाउँछ । टाँसिएको लेखाइ असन्तुलित व्यक्तित्व तथा संकोची प्रवृत्तिका प्रतिक मानिन्छन् ।
- ठूलो आकारको अक्षर लेखकमा अरुप्रति सहानुभूतिको भावना हुन्छ भने छोटो अक्षर लेखकमा अन्तर्मुखी तथा स्वार्थी प्रवृत्तिको भावना केन्द्रित हुन्छ । शुरुदेखि अन्त्यसम्म शब्दको एउटै किसिमको लेखाई शैलीले लेखकको उदासिनता जनाउँछ ।
- खाँदेर अक्षर लेख्नेहरु मक्खीचुस तथा कृपण स्वभावका हुन्छन् । खुल्ला लेख्ने व्यक्ति प्राय रसिक प्रवृत्तिका हुन्छन् । देब्रेतर्फ शुरुमा पर्याप्त ठाउँ छाड्ने र अन्त्यमा कम छाड्ने व्यक्तिहरु खर्चिला स्वभावका हुन्छन् । शुरुमा कम गर्ने र अन्त्यमा क्रमश ः बढी बढी ठाउँ छाड्दै जाने व्यक्तिहरु बचत गर्ने प्रवृत्तिका हुन्छन् ।
- आवश्यक विराम चिन्हको अभावग्रस्त लेखाईले विचारहीन र अविश्वसनीयतालाई संकेत गर्दछ । विस्मयादिबोधक चिन्हको बढी प्रयोग सौन्दर्य र रोमान्सप्रियको मानक मानिन्छ ।
साङ्लोको दोस्रो गीत 'झ्याम्मै आँखा झ्याम्मै' (भिडियोसहित)
हरिवंश आचार्यको ‘म त फसेँ माकुरीको जालमा परेर’ सार्वजनिक
ओखलढुङ्गामा बिरामी बोकेको जीप दुर्घटना एकजनाको मृत्यु, ३ घाइते
राष्ट्रपति भवन अगाडि प्रदर्शन गर्ने अधिकारकर्मी पक्राउ
बग्दादस्थित अमेरिकी दूतावास नजिकै पाँच वटा रकेट दुर्घटना